» ओली कमरेडले आफू अध्यक्ष नभए नेकपा सकिन्छ, प्रधानमन्त्री छोडे देश खत्तम हुन्छ सोच्नु भ्रमको खेती हो!:- अष्टलक्ष्मी शाक्य ,हेर्नुहोस (भिडियो सहित) ओली कमरेडले आफू अध्यक्ष नभए नेकपा सकिन्छ, प्रधानमन्त्री छोडे देश खत्तम हुन्छ सोच्नु भ्रमको खेती हो!:- अष्टलक्ष्मी शाक्य ,हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
ओली कमरेडले आफू अध्यक्ष नभए नेकपा सकिन्छ, प्रधानमन्त्री छोडे देश खत्तम हुन्छ सोच्नु भ्रमको खेती हो!:- अष्टलक्ष्मी शाक्य ,हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
2020, December 1st, Tuesday
काठमाडौ । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णय स्वीकार्नु पर्ने बताएकी छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य शाक्यले पार्टीले कुनै पदबाट बिदा गर्न चाहे प्रधानमन्त्री ओली बिदा हुनु पर्ने बताइन्।
आफू अध्यक्ष नभए पार्टी सकिने र प्रधानमन्त्री नभएमा देश सकिने खालको सोच नराख्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई उनको सुझाव छ।
‘उहाँले अब सक्नुहुन्न ठूल्ठूला कुरा गरेर हुँदैन। मान्छेलाई धम्क्याएर लोभ देखाएर चल्दैन, सबैभन्दा पहिला दुइटा प्रतिवेदनमा छलफल चलाउनपर्‍यो। स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल हुनपर्‍यो,’ उनले भनिन् ‘उहाँलाई बाटो देखाइदिन सक्छौं, उहाँले सहजता अपनाउनु पर्छ। उहाँ नै उदाहरण बन्नुपर्छ। पार्टीले यो पदबाट बिदा लिनुपर्‍यो भन्यो भने मान्नुपर्छ, पार्टीभन्दा उहाँ माथि होइन। उहाँले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ।’
उनले सचिवालयमा आएका दुबै प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउनु पर्नेसमेत बताएकी छन्।
‘अहिले प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने होइन, सचिवालयमा आएपछि फिर्ता लिनेभन्दा पनि खुलेर छलफल गरौं भन्ने हो। सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन गरौं। प्रचण्डको प्रतिवेदनले कमीकमजोरीको उजागर गरेको छ, त्यसबारे छलफल गरौं,’ उनले भनिन् ‘एक अर्कामा लागेका आरोपबारे पनि सहजतापूर्वक छलफल गरेर जान सकिन्छ। प्रचण्डले गलत आरोप लगाएजस्तो लाग्दैन। यो प्रस्ताव प्रचण्ड कामरेडको मात्रै होइन, पाँचै जना नेताको संयुक्त हो।’
नेकपामा जारी विवाद र समाधानको बाटोबारे शाक्यसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस्ता छन् कुराकानीका मुख्य अंशः
-प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आरोपका लागिमात्रै आरोप लगाएजस्तो लाग्दैन। सत्य तथ्यमै होला। यसलाई गलत होजस्तो लाग्छ भने केपी कमरेडले तथ्यले चिर्न सक्नुहुन्छ। आत्तिन जरुरी छैन।
-प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण पार्टीमा बिग्रह आएको हो। यो जटिलताको जिम्मेवार उहाँ नै हो। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सहजतापूर्वक भाग लिनुस्। यसलाई मान्दै मान्दिनँ भन्ने होइन।
-१६ गतेको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ। त्यसपछि दुबै प्रतिवेदनबारे छलफल चलाउनु पर्छ। छलफल चलाउँदा अन्तरपार्टी संघर्षलाई अंगाल्नुपर्छ। गाली गलौजको शैलीमा गर्नु हुँदैन। संयम भएर छलफल चलाउनु पर्छ।
-एकले अर्कालाई नटेर्ने, आक्रोशपूर्ण व्यवहार गर्ने, विरोधमा लागेको भनेर अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुन पाइँदैन। आचासंहिता बनाएर छलफल चलाउनुपर्छ। हिजो पनि यस्ता खालका छलफल चलेकै थिए। यस्तो भएन भने पार्टी गतिशील हुँदैन। जीवित पार्टीमा यो जरूरी छ।
-प्रचण्डको प्रतिवेदलाई उहाँले आरोप पत्र भन्न मिल्दैन। त्यसमा केही सत्यतथ्य छ। दुबै जना अध्यक्ष हो। प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिने अनि ओलीले नलिने भन्ने हुँदैन।लिएमा दुबैले फिर्ता लिनुपर्छ तर अब यसलाई पार्टीमै छलफल चलाउनुपर्छ।
-केपी कमरेडसँग प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक सोच छैन। पार्टी विधिसम्मत ढंगले नचलाउने शैली उहाँमा छन्। उहाँको काम गर्ने शैली ठीक छैन। भिडियो हेर्नुहोस: